အိမ်မှာနေပြီး အထီးကျန်၊ စိတ်ကျနေတဲ့မေမေတို့အတွက် – Burmese Baby
ကလေးအမေတွေ အိမ်မှာနေပြီးအထီးကျန်သလိုခံစားနေရတယ်ဆိုရင် လူတွေကနားမလည်ကြဘူး။ ဘေးမှာလူတွေရှိနေပါလျက်နဲ့ ဘယ်လိုများအထီးကျန်သလိုခံစားနေကြပါလိမ့်လို့ထင်မယ်။ တချို့ကလဲ “တို့များတော့ အိမ်မှာနေချင်လွန်းလို့အေ” လို့ပြောကြသေးတယ်။ တချိန်မှာဒီလိုမျိုးခံစားလာရနိုင်တယ်လို့ ကိုယ်လဲဘယ်ထင်ခဲ့မလဲနော်? ကိုယ်အရမ်းချစ်တဲ့သားသမီးတွေလို သူတို့မရှိရင်ကိုယ်အသက်မရှင်ချင်လောက်အောင်ချစ်ရတဲ့သူတွေအနားကနေတောင် တခါတလေထွက်ပြေးချင်မိတဲ့အထိခံစားမိတာ။ “အကောင်းဆုံးမိခင်နဲ့အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်ကြိုးစားပြီးနေမယ်ဟဲ့” ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာ ဒီအခြေအနေကြောင့်ပဲ စိတ်တွေဆင်းရဲနေမိတာ။ ဒါတွေဟာ အပိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ဒါတွေဟာ ခံစားမှုအစစ်တွေ။ ဒီအမေတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ တကယ့်ခံစားမှုတွေ။ ဒါတွေဟာ ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်း နေ့တိုင်းလိုလိုအိမ်မှာနေနေရတဲ့ stay at home mom (SAHM) တွေရဲ့ဘဝ၊ သူတို့ရဲ့စိတ်ကျဝေဒနာတွေ။မိမိရွေးချယ်မှုကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့်သော်လည်းကောင်း အိမ်မှာနေနေရတဲ့အမေတွေရဲ့ဘဝဟာ ထင်သလောက်မလွယ်ပါဘူး။ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ပင်ပန်းကြတယ်။ ကျွန်မကရမ်းသမ်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ဒီကိစ္စက သုတေသနလုပ်ထားပြီးသားပါ။ မိခင်တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး GALLUP ကလုပ်ထားတဲ့ တဲ့စစ်တမ်းထဲမှာ နေ့တိုင်းအိမ်မှာပဲနေနေရတဲ့အမေတွေဟာ အပြင်ထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အမေတွေထက်ပိုပြီးတော့ စိတ်တို၊ ဝမ်းနည်း၊ စိတ်ကျတာတွေပိုဖြစ်ကြပါသတဲ့။ (ဒီ GALLUP က စစ်တမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ နောက်မှထပ်ပြောပြမယ်။)
လူတွေထင်တာက အိမ်မှာနေရတဲ့အမေဆိုရင် ဘဝကသာသာယာယာလေး၊ ကလေးလေးနဲ့နေ၊ ပိုက်ဆံရှာစရာမလို၊ ထမင်းဟင်းလေးချက်စား၊ ရေချိုးသနပ်ခါးလိမ်းပြီး ရပ်ကွက်ထဲလမ်းထဲလျှောက်လည်ချင်လည်လိုက်၊ သူများတွေအလုပ်ကြိုးစားပမ်းစားလုပ်နေတဲ့အချိန် သူတို့ကအေးဆေးပဲလို့ထင်ကြတာ။ တချို့အတွက်တော့ဟုတ်မှာပေါ့။ တကယ်တမ်းမှာ အိမ်မှာနေရတဲ့အမေတော်တော်များများဟာ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်အချိန်မရှိ၊ မိသားစုလိုအပ်ချက်တွေလိုက်ဖြည့်စည်း၊ ကိုယ်လိုချင် ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေကိုနောက်ချန်ထားရတဲ့သူ … မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းရယ်လို့မတွေ့နိုင်၊ စကားသေချာပြောချိန်မရှိ၊ အမြဲတမ်းတစ်ယောက်ထဲလိုဖြစ်နေတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီလိုနေ့စဉ်ဘဝထဲမှာပဲလည်ပတ်ရင်း တနေ့ထက်တနေ့ စိတ်တွေကျလာကြတယ်။
“အမလေး တို့က နင်တို့လိုကိုယ့်သားသမီးအနားနေခွင့် ပြုစုခွင့်ရချင်တာ” လို့တချို့တွေကပြောကြမယ်။ အဲဒီလိုအပြောခံရရင် ကိုယ်တွေကလဲ “ဟုတ်သားပဲ၊ ငါကဘာလို့ ဒီလိုနေရတာကို စိတ်ညစ်နေမိပါလိမ့်” လို့ပြန်တွေးမိပြန်ရော။ အဖြေကတော့ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုအနေအထားတွေအပြင်၊ အိမ်မှာနေပြီး တနေကုန်မနားမနေလုပ်နေလဲ တန်ဖိုးထားမခံရတာတွေရှိနိုင်တာ၊ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ပုံသေနည်းအတိုင်းပဲ တပုံစံထဲဖြတ်သန်းနေရတာ၊ အထီးကျန်တာတွေအပြင် ကိုယ့်အားဖြင့်ရတဲ့ဝင်ငွေရယ်လို့မရှိတာကြောင့် စိတ်ဓါတ်တွေကျလာကြတယ်။ စီးပွားရေး အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေတဲ့မိသားစုဆိုရင် ပိုဆိုးတယ်။
ဒါတွေဟာ တကယ့်ခံစားချက်တွေနော်။ ဒီလိုတွေ တွေးမြင်ခံစားပြီး စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့အမေတွေအများကြီးရှိတယ်။ “သေချင်စိတ်ပေါက်နေတယ်” လို့ရေးတဲ့ ကလေးအမေတွေရဲ့စတေးတပ်စ်တွေ တနေ့ကိုဘယ်နှခုဖတ်မိတယ်ထင်လဲ? အများကြီးပဲ။ အခုဒီခံစားချက်တွေကို နည်းနည်းလောက်သက်သာစေနိုင်တဲ့နည်းလမ်း ၅ ခုပြောပြပါမယ်နော်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းစိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေ၊ သေချင်စိတ်ပေါက်တဲ့အထိဖြစ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ပြဖို့လိုပါတယ်။ (ကျွန်မတောင်ဆရာဝန်နဲ့ပြထားပါတယ်။ တကယ်သက်သာတယ်။ ကျွန်မဆရာဝန်နာမည်သိချင်ရင် ကွန်မန့်မှာမေးပါနော်။)
၁ – လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
မအားဘူးဆိုတာသိပါတယ်။ အချိန်မရှိလောက်ဘူးဆိုတာလဲသိတယ်။ ဒါပေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက ကိုယ့်ဦးနှောက်ကိုအထောက်အကူဖြစ်တယ်၊ ကိုယ့်ခန္ဓာကိ်ုယ်ကိုလှစေတယ်။ ကျန်းမာရေးကောင်းစေတယ်။ မနက်စောစောထလုပ်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် တနေ့ကို ၁၅ မိနစ်၊ မိနစ် ၂၀ ဆိုရင် ရပါပြီ။ လေ့ကျင့်ခန်းပိုစ့်ရေးပြီးသားတွေ ပြန်တင်ပေးပါမယ်နော်။
၂ – လေကောင်းလေသန့်ရှုပါ။ နေရောင်ခံပါ။
အိမ်မှာနေတဲ့ကလေးအမေတွေအတွက်ကတော့ ဘယ်အချိန်မိုးချုပ်လို့ချုပ်သွားမှန်းမသိတဲ့ဘဝတွေပါ။ အိမ်အလုပ်လုပ်လိုက်၊ ကလေးထိန်းလိုက်၊ Facebook သုံးလိုက်၊ စိတ်ညစ်စိတ်တိုလိုက်နဲ့ ပတ်ချာလည်နေကြတယ်။ အဲဒါတွေခဏရပ်ပြီး အပြင်ထွက် လမ်းလျှောက်ကြပါ။
၃ – အစားကောင်းကောင်းစားပါ။
တွေ့ကရာကြုံရာတွေမစားပါနဲ့။ သားအကျန် သမီးအကျန်တွေချည်းမစားပါနဲ့။ ကိုယ်စားချင်တာလေးတွေ ကိုယ်ကြိုက်တတ်တာလေးတွေ ချက်စားပါ။
၄ – ကိုယ့်လိုအနေအထားရှိတဲ့ ကလေးအမေသူငယ်ချင်းနည်းနည်းရှာထားပါ။
ကိုယ်ပြောတာကို သေချာနားလည်မယ့်သူငယ်ချင်းရှိတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကိုရင်ဖွင့်လိုက်ရတာကိုက စိတ်အရမ်းသက်သာစေပါတယ်။ အချိန်ရရင် Gym လေးသွားနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလဲလုပ်၊ အပြင်လဲထွက်ရ၊ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေလဲရ။ ခဲတစ်လုံးနဲ့ငှက်သုံးကောင်ပစ်နိုင်တာပေါ့။
၅ – ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ ဒီလိုခံစားနေရတာမဟုတ်ပဲ၊ ကိုယ့်လိုလူတွေ အများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာသတိရပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲနိုင်တာမိခင်တွေပါပဲ။ The next generation leaders (အနာဂါတ်ခေါင်းဆောင်တွေ) ကို အနီးကပ်ပြုစုစောင့်ရှောက်နေရတယ်လို့သာတွေးလိုက်ပါ။ ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်လဲနော်? 😊
❤️ စိတ်ဓါတ်ကျနေသောမိခင်များကို နားလည်မှူရှိခြင်းအားဖြင့်၊ မိမိသည်လူယဉ်ကျေးဖြစ်ကြောင်းပြခြင်းအားဖြင့် negative ဆန်သောမှတ်ချက်များမပေးပါရန်။
Ref : https://amp.pastemagazine.com/
မိဘတွေဆီမှာ ပိုချစ်ရတဲ့ သားသမီးရှိတယ်ဆိုတာမှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြု….